Saddex bangi ayaa lagu ganaaxay £413 oo milyan kadib markii ay badaleen dulsaarka ay lacagaha bangiyada ku kala ammaahdaan - BBC Somali
Saddex bangi ayaa lagu ganaaxay £413 oo milyan kadib markii ay badaleen dulsaarka ay lacagaha bangiyada ku kala ammaahdaan
Guddiga Yurub ayaa ku ganaaxay saddex bangi £413 oo milyan, kadib markii ay badaleen qiimaha lacagta dulsaarka Euribor ee bangiyada yurub ay lacagta ku kala ammaahdaan.
Qiimaha Euribor ayaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo ammaahyo badan oo balaayiin euro ah.
Guddiga Yurub ayaa ganaaxay siddeed bangi oo ay ku jiraan HSBC, JPMorgan iyo Credit Agricole iyagoo si sharci daro ah u wadaagay xog ku saabsan Euribor, si ay u sameeyaan faa'iido ayuu sheegay guddiga.
Laba ka mid ah bangiyada, Barclays iyo UBS, ayaa laga cafiyay ganaaxa kadib markii ay sheegeen arrinta qaladka ah ee ay bangiyada samaynayaan.
JPMorgan iyo HSBC ayaa beeniyay inay qalad sameeyeen, waxayna sheegeen in laga yaabo inay racfaan ka qaataan go'aanka.
Barclays, Deutsche Bank, RBS iyo Societe Generale ayaa la ganaaxay 2013 qaybtii ay ku lahaayeen badalida dulsaarka iyagoo bixiyay £1.4 bilyan.
Gudoomiyaha, Margrethe Vestager, ayaa sheegay: "Bangiyada waa inay xushmeeyaan sharciyada Midowga Yurub ee tartanka sida shirkadaha kale ee ka shaqeeya suuqa Yurub".
Guddiga ayaa ku ganaaxay JPMorgan Chase €337m, Credit Agricole €115m, iyo HSBC €34m.
Meelaha lagu sheekaysanayay
Baaritaanka ayaa lagu helay in ay isla wada shaqaynayeen bangiyada inta u dhaxaysay September 2005 ilaa May 2008.
Shaqaalaha bangiga ayaa isticmaalay internetka meelaha lagu sheekaysto (chat rooms) iyo (instant messaging) iyagoo ka hadlaya qiimaha la doonayo inuu noqdo dulsaarka Euribor. Euribore ayaa ah dulsaarka ay bangiyada lacagaha ku kala ammaahdan.
Arrintan ayaa wax ka badashay qiimaha ammaahyada dadka la siiyo, sida ammaahyada guryaha lagu gato iyo kuwa ay qaataan ardayda jaamacadaha dhigta.
Afhayeenka JP Morgan ayaa sheegtay in bangiga uusan samayn wax qalad ah.
"waan la shaqaynay Guddiga Yurub shantii sano ee uu socday baaritaanka," ayay tiri.
"Ma samayn wax qalad ah oo ku saabsan qiimaha Euribor. Waxaan sii wadaynaa inaan iska difaacno eedeymaha, oo ay ku jirto inaan racfaan ka qaadano maxkamadda Yurub."
Afhayeenka HSBC ayaa sheegay : "Waxaan aaminsanahay inaa ka qayb qaadan talaabo ka soo horjeeda tartanka. Waxaan dib u eegaynaa go'aanka Guddiga Yurub waxaana fiirinaynaa talaabooyinka sharci ee noo banaan."